Enwere m ike ịde blọgụ gbasara achịcha? | Martech Zone
Satọde, Satọdee 23, 2006 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Etubeghị m isi.
N'ezie, enwebeghị m.
Ruo ọtụtụ izu, ikekwe ọnwa, anọwo m na-eche banyere ịde blọgụ gbasara achịcha. Ọ bụghị naanị achịcha ọ bụla… ọ bụ achịcha kachasị ịtụnanya nke m chere na m rie. Anaghị m egwu egwu. N'ime ụlọ ahịa ebe e nwere ụdị ogbe achịcha 300 na shelf, achịcha a apụtaghị.
Ọ bụ Brownberry 12 ọka.
Ngwakọta pụrụ iche nke ọka iri na abụọ a ghere n'ime achịcha na-atọ ụtọ nke nwere uru nke ọka na-enweghị trans abụba. - site na weebụsaịtị
Nke ahụ adịghịdị nso ịkọwa ya. Ọ dị nro… mana obere ntakịrị ibe na ụyọkọ ọka. Ọ naghị adị nro na ọ ga-adọka ma ọ bụ jidesie ya ike ma ọ bụ ihe ọ bụla. Asttọ ya obere butter na ọ dị mma. Ọ browns mgbe ubé… n'èzí crusty, n'ime juu na-atọ ụtọ. Nri ọ bụla nwere ekpomeekpo ọhụrụ. Mmmmm.
Mgbe ụfọdụ m na-eme onwe m nnukwu sandwich… tolotolo, swiss baby, letus, tomato… ma mgbe m richara ya, iwe na-eju m obi na ihe ndị ọzọ niile ahụ gwụrụ achịcha ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọta onwe gị ịchọrọ ịzụta achịcha a, kpachara anya! Enwere ndị nduhie "12 ọka" ndị ọzọ na shelf. Ha ọbụna ngwugwu onwe ha otu ihe… ma ha inu! Cheta ihe osise, cheta aha, zuta achicha. Tụkwasa m obi.
Ọ bụrụ na post a nyere gị nsogbu, biko gbaghara m. Ha anaghị akwụ m ụgwọ (ọ bụ ezie na m ga-anara achịcha). Aga m echighachi azu na nke m soon mana ugbua, aga m enwe iberibe achịcha Brownberry 12 in toasted as na butter.
Sep 23, 2006 na 4:26 PM
Hmm, On Influence and Automation - blog ahịa na teknụzụ; Biputere isiokwu Brownberry 12 Grain Bread. Yep ga-ekwenye na Sean, tụfuru uche gị.
Na ederede ozo, obu ezie na anwabeghi m achicha ahu, otu ihe kpatara ya bu na m nwere igwe achicha ma jiri ya. M na-eme ka a pụtara mmanụ a honeyụ oatmeal achịcha iji steelcut otis, na-akwa na iche iche Pizza crusts.
Oh bugger, echefuru m ịgbanwe mgbakwunye, ma ugbu a ọ dịghị ka ọ ga-ahapụ m tinye okwu a, ebe ọ na-agwa m na etinyela m ya.
Sep 23, 2006 na 8:19 PM
Nwoke, i nwawo nkpuru achicha achicha na butter? UGBU A Nke ahụ dị mma achịcha 😀
Sep 24, 2006 na 8: 36 AM
Adịghị m onye butter. Ugbu a, cheese gbasaa (cheese cheese) na jam, nke ahụ bụ m!
Achịcha mmiri ara bụ ọkacha mmasị m, ogologo!
Sep 25, 2006 na 3:24 PM
Hmm, ị nwetụla mgbe ị nwara achịcha ọhụrụ sitere na obere ebe a na-eme achịcha na ndịda Germany?
Ma ọ bụ baguette ọhụrụ, na-ekpo ọkụ n'otu obere obodo French?
Would gaghị emetụ achịcha mechiri emechi, nke mepere emepe.
Ọkt 13, 2006 na 6:38 PM
Nso akwa mbubreyo mbụme ke emi edi ntem! Kedu mkpụrụ ọka 12 dị na ntụ ọka ọka iri na abụọ?
Ọkt 19, 2006 na 2:51 PM
LOL… .Achọtara m ihe ọchị. Anọ m na net na-achọ ịchọta ụzọ dị mma maka achịcha ọka iri na abụọ. Agaghị m achọta nnukwu ebe a na Nebraska. Mgbe anyi gachara Canada otu izu gara aga ma nwaa achicha nkpuru 12 nke Dempster… anyi na ewere madly na ya. Ya mere if .ma ọ bụrụ na onye ọ bụla achọta ụzọ esi nri, biko mee ka m mara. Daalụ! Nina
Ọkt 19, 2006 na 7:40 PM
Ọ bụrụ na ịchọrọ onyele maka achịcha gị mgbe ịchọtara ya, nweere onwe gị izitere m otu ogbe achịcha. Aga m eji nlezianya mee ihe nhazi ọ bụla! Mmmmmm.
Brownberry 12 Mkpụrụ ọka - Ọ bụrụ na ị na-elele ngwungwu achịcha ọ bụla taa, atụmatụ ọ bụla, Ngalaba Nri Ntanetị nke US.
Ihe ngwugwu ndia ekwughi bu na achicha di gi nma karie ndi ozo. Ha anaghị akọwara na nri ndị ahụ ruo isii ma iri na otu a tụrụ aro pere mpe bụ obere: naanị 1/2-iko pasta ma ọ bụ osikapa ma ọ bụ otu obere achịcha. Ga-eji ugboro anọ were naanị otu bagel si Dunkin? Donuts.
Jun 16, 2007 na 4:50 AM
“DouglasKarr.com kwadoro site na WordPress na Brownberry 12 Ọka achịcha” 😀
Nke ahụ ga-ama jijiji, n'ezie 🙂
Doug, ị nwere ike ide banyere ihe ọ bụla, gụnyere achịcha (ọ bụghị na m nwere ike ịzụta ụdị a kapịrị ọnụ site na ebe m bi ;-) … Enwere m mmasị na post a…
Nọgidenụ na-ezi ihe ederede! 🙂
(Oge mbụ ịga na blọọgụ gị)